Ny chimpanzee, Birds, Wildlife Protection dia nifarana tao amin'ny ala Uganda Bugoma
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Ny chimpanzee, Birds, Wildlife Protection dia nifarana tao amin'ny ala Uganda Bugoma
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • People • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda
Any Oganda, ny Fiarovana Chimpanzee sy ny fiarovana ny biby dia ny National Association of Professional Environmentalists (NAPE), ECOTRUST, Uganda Association Association, Uganda Association of Uganda Tour Operators (AUTO) Association for the Conservation of Bugoma Forest and Tree Talk Plus dia miady ho an'ny Ala Bugoma ho voavonjy.
Ny mpiasan'ny Ivontoerana enina misahana ny fitantanana angovo (AFIEGO) enina, anisan'izany ny tale jeneraly Dickens Kamugisha, dia nosamborina ary notanana am-ponja ao Oganda ao amin'ny Kaira Police Kiira, Kampala tamin'ny 22 Oktobra 2021 noho ny asany tsy nisy fahazoan-dàlana.
Voamarina izany tamin'ny sioka iray navoaka tao amin'ny pejy Twitter an'ny AFIEGO taorinan'ny fisamborana.
AFIEGO dia tao amin'ny Ivontoeran'ny fampielezan-kevitra #saveBugomaforest any andrefan'i Ogandà taorian'ny 5,779 41,144 hektara hektara amin'ny ala XNUMX hektara no nampanofain'ny Fanjakana Bunyoro Kitara an'i Hoima Sugar Limited ho an'ny fambolena siramamy.
Ivon-toerana momba ny fitondrana angovo Africa (AFIEGO) dia orinasa Ogandà manao fikarohana politika sy fanentanana hiantraika amin'ny politikan'ny angovo hahasoa ny mahantra sy marefo.
Hatramin'ny volana aogositra 2020, rehefa nierona tamin'ny fiainana ny kilasy mekanika ho ampahany amin'ny tetikasam-pampandrosoana fary mampiady hevitra, ny mponina sy ny vondrona fiarahamonim-pirenena eo ambanin'ny fampielezan-kevitra Save Bugoma Forest dia nanao ady ara-dalàna.
Ny fisamborana dia nitranga taorian'ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana ambony Uganda, Musa Sekana, ny volana septambra 2021.
Taorian'ny fanapahana momba ny fanjakana hanofana ny ampahany amin'ny ala taorian'ny nananganana raharaha tamin'ny AFIEGO sy ny tambajotra momba ny rano sy tontolo iainana (WEMNET) tamin'ny National Agency Management Agency (NEMA) noho ny fankatoavany ny tatitra momba ny tombana ny tontolo iainana sy ny fiatraikany ara-tsosialy (ESIA).
Ny tatitra dia natolotry ny Hoima Sugar Limited tamim-pahadisoana nilaza fa ny tahiry tian'izy ireo hampiasaina amin'ny famokarana siramamy dia ao anaty ala feno ala ary tsy misy akony amin'ny fetran'ny ala. Nolazaina fa mifanila amin'ny ala Bugoma izy na eo aza ny sary zanabolana mampiseho ny mifanohitra amin'izany.
Ny ala Bugoma dia ala tropikaly voaaro izay any atsimo andrefan'ny Hoima sy avaratra atsinanan'ny tanànan'i Kyenjojo, ary atsinanan'ny Farihy Albert, ao amin'ny distrikan'i Hoima any andrefan'i Oganda. Nalefa tamin'ny taona 1930 izy io ary teo ambanin'ny baikon'ny National Forestry Authority tamin'ny 2003
Tamin'ny 1 Aogositra 2016, namoaka lohateny momba ny tany 5,779 hektara (22 Miles Square) ho an'ny Fanjakan'i Bunyoro Kitarawhich ny Vaomiera momba ny tany Oganda.
Ny tany dia nampanofaina avy hatrany tamin'ny Hoima Sugar. Tamin'ny volana mey 2019, ny mpitsara ny fitsarana avo ao amin'ny distrikan'i Masindi, Wilson Masalu dia niantehitra tamin'ny fijoroana ho vavolon'ny Komisiona misahana ny fanajariana ny tany sy ny sarintany, Wilson Ogalo tamin'ny fotoam-pitsarana nanamelohana ny Fahefana Nasionalin'ny ala (NFA) izay
Nanapakevitra ny mpitsara arakaraka ny fijoroana vavolombelona, ​​ny 5,779 hektara momba ny Ala Reserve any Bugoma dia heverina ho any ivelan'ny ala.
Noho izany dia notapahina fa ny tany misy ady dia an'i Omukama (Mpanjakan'i Bunyoro). Ity didim-pitsarana ity dia nanokatra tanana maimaim-poana tamin'ny fanjakana hanofa ny tany amin'ny Hoima Sugar.
Ny tetikasan'ny Kaomisera Ogalos dia miavaka taorian'ny fandàvana azy nandritra ny fanadihadiana mitovy amin'izany momba ny famotehana ny Ala Kisankobe ao amin'ny distrikan'ny Mukono tamin'ny Oktobra 2020.
Notarihin'i Kamgusha, ny fampielezana #SaveBugomaForest dia tonga tany amin'ny Rt ihany tamin'ny farany. Andriamatoa Lehiben'ny Parlemanta Oganda Jacob L'Okori Oulanyah Chambers amin'ny Alakamisy 9 septambra 2021.
Ny vondrom-piarahamonina monina manodidina ny ala Bugoma dia nangataka ny fiarovana ny ala. Tian'izy ireo ihany koa ny parlemanta hifanakalo hevitra momba ny hetsika famonjena ny ala. Ny hetsika dia teo amin'ny taratasy fandefasana entana nanomboka ny 28 septambra 2021.
Nisy fanangonan-tsonia natolotra mba hampitsaharana ny fanimbana ny Reserve Reserve Central Forest any Bugoma.
Ny fanangonan-tsonia dia nosoniavin'ny olona 20 000 mahery monina any amin'ireo tanàna 30+ any amin'ny distrikan'i Kikuube sy Hoima.
Ireo distrika ireo dia fonenan'ny ala tandindomin-doza. Ny karazana any an'ala dia ao Oganda Mangabey, Chimpanzees, ary ny vorona.
Ny fanangonan-tsonia dia nitaky ny hampitsaharana avy hatrany ny fandringanana ny ala Bugoma ary hitahiry ny fiveloman'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary hitahiry ny lova voajanahary Oganda.
Natolotry ny filoham-pirenena amin'ny komity parlemantera misahana ny tontolo iainana izany.
Ny fanangonan-tsonia koa dia notohanan'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena hafa anisan'izany ny Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), ny rano sy ny tontolo iainana, ny Media Network (WEMNET), ny Chimpanzee Sanctuary ary ny Wildlife Conservation Trust, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), ECOTRUST, Uganda Tourism Association, Association of Uganda Tour Operators (AUTO) Association ho an'ny fiarovana ny ala Bugoma sy ny hazo Talk Plus.
Teo anelanelan'ny volana aogositra sy septambra dia elefanta ala sy chimpanzees roa no hita faty tao amin'ny faritry ny ala vokatry ny adin'olombelona sy ny bibidia satria nanjary tsy ampy rano ireo biby raha nanery azy ireo ny ala mba hitady sakafo any amin'ny zaridaina fananana. amin'ireo vondrom-piarahamonina mifanila aminy.
Hatramin'ny nanombohan'ny fanadiovana ny ala dia tamy ny chimpanzees sy ny biby fiompy mandositra no nanafika ny mponina amin'ny faritra manodidina ary nanafika ny voly.
Niharan'ny tsindry mafy koa ny AFIEGO noho ny fiarovana ny zon'ny vondrom-piarahamonina voakasiky ny solitany ao amin'ny distrikan'i Hoima. Ny mahatsikaiky dia arovan'ny fanjakana Bunyoro Kitara ihany koa izy ireo.
Tamin'ny volana septambra 2020, Venex Watebawa sy Joshua Mutale, mpanao gazety WEMNET dia nosamborina tany Hoima handeha hanatrika fandaharana amin'ny radio amin'ny Spice FM.
Ny polisy Oganda dia nanandrana nanakana ny hetsika # savebugomaforest.
Ny fanadiovana an'i AFIEGO no farany tamin'ny fisamborana hatramin'ny volana aogositra 2020, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana maro no voarohirohy amin'ny asa zon'olombelona, ​​olona tratry ny tetikasa famokarana solika solika ary niato ny asany ny tontolo iainana taorian'ny nandosiran'izy ireo ny governemanta tao amin'ny Làlana diso.
Nanaiky ny komisim-paritry ny distrika Kikube Amian Tumusiime satria niampanga ireo masoivohon'ny governemanta foibe sy ny Fanjakana Bunyoro Kitara ho nanao kolikoly noho ny tsy fanokafana ny faran'ny ala Bugoma rehefa namaly ny olana napetraky ny fifanakalozan-kevitra momba ny fiarovana ny vondrom-piarahamonina nokarakarain'ny fiaraha-mientana miady amin'ny kolikoly. .